Andry Rajoelina Tsy miteny tsy mivolana
Mahagaga ireo mpanara-baovao ny tsy fahitana hatramin�izao ny filoha mpanorina ny vondrona Mapar, Andry Nirina Rajoelina, amin�izao vanim-potoana heverina fa mamaivay ho an�ny vondrona politika izay tarihiny izao.
Hatramin’ny fiandohan’ny raharaha Lilyson ka hatramin’izao raharaha nampidoboka am-ponja ny minisitra teo aloha, Augustin Andriamananoro, izay samy mpikambana mavitrika ao anatin’ny vondrona misy azy izao dia tsy nandrenesam-peo mihitsy ny filoha Andry Nirina Rajoelina. Ity minisitra teo aloha ity izay azo lazaina fa anisan’ireo tanana ankavanan’ny filohan’ny Mapar. Ny mahagaga anefa dia fikambanana manohana ity filoha ity no nanomboka mijoro milaza ny heviny fa tsy mankasitraka ny antsojay atao amin’ny minisitra Andriamananoro sy ireo mpiara-dia amin’izy ireo ankehitriny. Rahoviana ary ny fotoana mety hitenenan’ny filohan’ny Mapar amin’izay ?